Online Marg | मेस्सी फेरि बार्सिलोनामै !
मेस्सी फेरि बार्सिलोनामै !
सोमबार, कार्तिक १५ २०७८
१५ कात्तिक, काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मेन ९पीएसजी०का फरवार्ड लिओनल मेस्सीले आफू पुनः बार्सिलोनामै फर्किनका लागि तयार भएको बताएका छन् ।
प्राविधिक सचिवको रुपमा बार्सिलोना फर्किन आफू तयार भएको मेस्सीले बताएका हुन् । बार्सिलोना छाडेर पीएसजी गएका अर्जेन्टाइन स्टार मेसीले पुनः बार्सिलोनामा फर्किएर क्लबको व्यवस्थापन टिममा रहने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘मैले सधैं भनेको थिएँ कि म क्लबलाई जसरी पनि मद्दत गर्न चाहन्छु,’ स्पोर्टसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘म प्राविधिक सचिव बन्न चाहन्छु ।’ तर उनले बार्सिलोनामै रहन्छु कि रहँदैन भन्ने कुरा आफैंलाई थाहा नभएको बताए ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘म क्लबमा फर्केर सक्दो योगदान गर्न चाहन्छु । किनभने म बार्सिलोनालाई माया गर्छु र उनीहरूलाई राम्रो गर्दै विश्वको उत्कृष्ट बनाउन चाहन्छु ।’
धुर्मुसले दिउसै रात पारेको खुलासा !
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाबाट हात झिकेका धुर्मुससुन्तली अब चाहि ढुक्क, प्रचण्डलाई तनाव हुनेगरी प्रचण्डपुत्री रेणुले चालिन् बोल्ड कदम !
राष्ट्रिय टिमको क्याप्टेन बनेपछि सन्दीप लामिछानेले पहिलोपटक दिए प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?